Ukuqonda Ukubaluleka Kwemihlahlandlela Yekhwalithi Yokusungula (IQG) | Martech Zone
Ukuthenga imidiya ku-inthanethi akufani nokuthenga umatilasi. Umthengi angabona umatilasi kwesinye isitolo afuna ukusithenga, angaqapheli ukuthi kwesinye isitolo, ucezu olufanayo luyintengo ephansi ngoba lungaphansi kwegama elihlukile. Lesi simo senza kube nzima kakhulu kumthengi ukwazi kahle ukuthi batholani; okufanayo kuya ekukhangiseni okuku-inthanethi, lapho amayunithi athengwa futhi athengiswe aphinde afakwe kabusha kubaphakeli abahlukahlukene, okwenza indawo yemakethe enenkungu lapho abathengi banokukhanya okuncane kakhulu.
Le nkinga isuselwa ekutheni kunezinkulungwane zezinkampani ezikule ndawo, iningi lazo ezinolimi oluhlukile, imithetho ehlukile, amamethrikhi ahlukile kanye nendlela ehlukile yokusebenzisa ibhizinisi labo. Lokhu kushoda kwendlela efanayo kuye kwaholela ekutheni Imihlahlandlela yekhwalithi ye-TAG Yokusungula (IQG), inqubo yokuthola izitifiketi yabathengisi bezikhangiso ezidijithali. I-IQG inikela ngezinga eliyisisekelo lokuthengiselana, ivumela abathengi ukuthi benze izinqumo ezinolwazi ngokuya ngekhwalithi. Iqinisekisa uhlaka lokuphepha komkhiqizo kanye nokwenza izinto obala kwabathengi.
Inhloso yalolu hlelo ukukhuthaza indawo yokwethembana ezimakethe nokunciphisa noma yikuphi ukungqubuzana. Le mihlahlandlela inikela ngolimi oluvamile oluchaza ngokusobala izici zokufakwa kwezikhangiso nokwenziwe kulo lonke uchungechunge lwevelu yokukhangisa. Abathengisi bangasebenzisa lolu hlaka olujwayelekile lokudalula embonini yonke ukuqinisekisa ukuthotshelwa kwezinga elikhulu nokwenza lula ukuxazululwa kwezingxabano nezikhalazo.
Abathengisi banethuba lokunqoba ukuhlukana ngokuhlanganyela ohlelweni lwe-IQG nokuthola ukuqinisekiswa kwenkampani yangaphandle kuzilawuli nezinqubo zabo ezahlukahlukene ezihlobene. Le mithetho eyisisekelo iqinisekisa ukuthi abathengi banokuqonda okuphelele kwalokho abakuthengayo, nokuthi abathengisi badalula imininingwane efanelekile ukwenza lokhu kube lula; izindlela ezinengqondo ngokuphelele zokuqhuba ibhizinisi.
I-IQG ithuthukisa yonke imboni ngokuvikela bobabili abakhangisi nabashicileli. Le mihlahlandlela iqinisekisa okuqukethwe kanye nemihlahlandlela yokudala evikela imikhiqizo nabashicileli ekuhlotshanisweni nokuqukethwe okungaphephile ngomkhiqizo. Abakhangisi bangaqinisekisa ukuthi izikhangiso zabo azenziwanga engosini ye-porn, futhi abashicileli bangavimbela izikhangiso ezisezingeni eliphansi ezingakulungele ukushicilelwa kwazo ukuthi zisebenze kusayithi labo.
Esinye isici esibalulekile se-IQG ukuthi iphoqa ababambiqhaza ukuthi babe nezinqubo ezibhalwe kahle zenhlangano yonke. Ithimba elicwaninga amabhuku lihlola izinqubo futhi liqinisekisa ukuthi inkampani iphila ngokuvumelana nale mihlahlandlela. Lesi siqinisekiso sakha amasheke nezilinganiso ezinkampanini zonke. Ngokwenza njalo, abacwaningi mabhuku basusa umqondo wolwazi lwezikhungo ngokwenza izinkampani zibhale phansi futhi zihambisane nezinqubo.
Ekugcineni, i-IQG ibeka inani lapho inani kufanele libe khona. Ngokususa izingqimba ezingabonakali lapho umthombo wazo ungaziwa, abadlali bayakwazi ukuqhuba ibhizinisi ngokushelela. Lokhu kuvumela bobabili abakhangisi nabashicileli ukuthi bakhulume ngokukhululekile nangokusobala ngezinto abasebenza kuzo. Njengoba kudlalwa amayunithi wezikhangiso ezisezingeni eliphakeme, abakhangisi bangaqhuba imikhankaso ephumelela kakhulu. Ngasikhathi sinye, lolu hlu lunikeza abashicileli ithuba lokuthola ama-CPM aphezulu ngokushaja inani elifanele lalezi zingxenye eziqinisekisiwe.
Ukukhangisa okuku-inthanethi yibhizinisi elincane futhi eliguqukayo, futhi njengoba imboni ikhula, abadlali banethuba lokwakha nokuqinisa umkhombandlela wayo. I-IQG iphakamisa amazinga ekhwalithi yokusungula futhi inikezela ngemikhiqizo enekhwalithi ephezulu kakhulu nezixazululo zokukhangisa ezisebenza ngempumelelo kunazo zonke. Lesi ngesinye futhi isinyathelo esinyathelweni sethu esinezinto eziningi futhi siyaqhubeka ukuqinisekisa ikhwalithi nokubaluleka kwawo wonke umuntu - ama-brand, ama-ejensi nabashicileli.
Mayelana nokubandakanya: i-BDR
Zibandakanye: I-BDR ihola ukukhokhiswa ngamazinga kanye nezitifiketi uma kukhulunywa nge-antifraud, malware kanye nekhwalithi yokusungula. Zibandakanye: I-BDR yaba enye yezinkampani zokuqala ezacwaningwa ngokuzimela emazingeni e-QAG futhi asaqhubeka nokuthola Isitifiketi se-IQG. Bandakanya: I-BDR iyaqhubeka nokusebenza ngokuqhubekayo nabashicileli ukulwa nezinto ezithinta kabi ikhwalithi yokusungula.
Tags: yokusungula izikhangisoukukhangisaukukhwabanisa kokukhangisayokusungula yokukhangisaikhwalithi yokukhangisaukuvimbela ukukhwabanisaikhwalithi yokusungulaImihlahlandlela yekhwalithi yokusungulaiqgI-malwareukukhangisa ku-inthanethiabamemezelitagImihlahlandlela yekhwalithi ye-TAG Yokusungulaukuqinisekiswa kweqembu lesithathu
UTed Dhanik uyi-CEO futhi ungumsunguli we- zibandakanya: BDR, Inc. UTed usebenza njengeChief Executive Officer eyengamele ukumaketha okuyisisekelo, ukuthengisa nokuthuthukiswa kwebhizinisi, ukuphathwa kobudlelwano bamakhasimende nokutholwa kokuqukethwe.